Kangton - Malunga Nathi - Kangton Industry, Inc.
Isango lomthi eligungxulwayo
Umnyango oqinileyo / weVeneer
Umnyango obunjiweyo we-HDF
Umnyango oqinileyo / wePivot
Umlilo ulinganiswe ngomnyango
Imbuyekezo Kangton, Inc. ngumnikezeli wesisombululo seprojekthi oPhezulu kuMgangatho woRhwebo, uMnyango kunye neKhabhinethi.
Ukusukela ngo-2004, besisabelana ngentengiso elungileyo kwihlabathi liphela, ikakhulu eMntla Melika, eYurophu, e-Australia nase Mzantsi Melika.
Umnyango wokuqala, umnyango weenkuni, umnyango olinganiswe ngomlilo, umnyango wokungena oqinileyo
IKhabinethi yeKhabhinethi, i-Wardrobe kunye neVanitory
Nge-CE, i-Floorscore, i-Greengard, i-Soncap, izatifikethi ze-FSC kunye novavanyo lwe-Intertek kunye ne-SGS.
Iimveliso zethu zikumgangatho ophezulu, zamkelwe ngempumelelo ngophawu olukhulu, ukuthengisa izindlu nomhlaba, inkampani kunye nevenkile ethengisa izinto kwihlabathi liphela.Ungazifumana izinto zethu kwiiprojekthi ezahlukeneyo eMntla Melika, eYurophu, e-Australia, eMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika, eMi- EMpuma naseAfrika.
Kangton khetha amaqabane ethu qhinga kunye nomgangatho umgangatho ngamazwe. Silawula ngokungqongqo umgangatho kwaye sinika ukuhlolwa kweQC ngexesha lokuvelisa nangaphambi kokulayisha. Bonke abathengi bethu baya kufumana ingxelo ye-QC eneefoto ezineenkcukacha kuthumelo ngalunye. Sinoxanduva lwexabiso elinamandla lokhuphiswano, umgangatho ophezulu kunye nokuphuhlisa imveliso entsha.
Inkonzo ye-DDP iyafumaneka, kubandakanya ukuhambisa ngenqanawa, irhafu, irhafu, ukuya kwiirhafu zomnyango. Injongo yethu kukudala ixabiso elongezelelweyo kubaxumi bethu kunye nokuphuhlisa kunye.
Nantoni na oyifunayo emnyango, kumgangatho okanye kwikhabhinethi, sikholelwa ukuba iKangton iya kukunika esona sisombululo silungileyo.
E-Kangton, uyakufumana ucango oluphezulu lwentengiso, umgangatho kunye nekhabhathi yokutshatisa ikhaya lakho ngokugqibeleleyo.
E-Kangton, uya konga iindleko kunye nexesha elinokubakho kwiimfuno zakho.
E-Kangton, uya kufumana isisombululo esithembekileyo sobuchule kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Ukusukela ngo-2004, iShishini leKangton, Inc. kungene umhlaba wezinto zokwakha ngenkxaso ye-ISO, izatifikethi ze-CE. Ngokunyusa okunamandla kwi-B2B kunye nemiboniso, uKangton wakhawuleza waziwa ngabathengi bamanye amazwe, abaphuhlisi kunye neenkampani ezithengisa izindlu, ukuze abengomnye wabanikezeli bezisombululo ezinamandla nezikhokelayo eTshayina.
I-Kangton ibonelela ngolona luhlu lubanzi, ibonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ukuze zilungele konke ukunambitheka, indawo yokuhlala okanye urhwebo, ngaphakathi okanye ngaphandle, ngokwesiko okanye nge-ultra-modern, i-classic okanye i-fasion, elula okanye ekhethekileyo. I-OEM yamkelekile. Ukuba nendlu eyahlukileyo ayilo phupha eKangton.
Imigca yokuqala yokuvelisa kunye nezixhobo ezingeniswe eJamani naseJapan, zenza iKangton Door, uMgangatho kunye neKhabhinethi ukuba ibe kwinqanaba eliphezulu. Umgaqo-nkqubo ongqongqo wolawulo lomgangatho kuyo nayiphina inkqubo ngexesha lokuvelisa uqinisekisa ukuba umgangatho wekhangoni uphezulu e-China. Umzekelo, iinkuni esizikhethileyo zahlulwe zangumlinganiso ongu-A, B, C, D kunye nomlilo owomileyo wamanzi ayi-8-10%. Iqela elizimeleyo le-QC lihambisa zonke iimpahla ngenqanawa nganye ngaphambi kokuhanjiswa. I-Kangton inikezela ngenene ngempahla eya kuthi ikwanelise.
Ukuba ngabanini zabelo kumzi-mveliso ngokutyala imali yindlela uKangton anokufumana ngayo ikowuteshini esezantsi kumzi-mveliso. I-Kangton ithumela ngaphandle ii-pcs ezingama-120,000 iingcango ngonyaka, ukuthengwa kwemali eninzi kwenza iKangton ngexabiso elifanelekileyo kakhulu. Ngaphandle koko, ukunceda abathengi ukuba bafumane inzuzo kwaye babe nokukhuphisana kwamaxabiso kwiimarike zabo, uKangton ugcina umda wenzuzo ephantsi. Ezi zinto zintathu ziqinisekisa ukuba uhlawula eyona ndleko iphantsi ngokusebenza neKangton.
Khetha i-Kangton kuthetha ukuba ukhetha iqela lobugcisa eliza kukusebenzela. Iinjineli zethu zikwintsimi yezinto zokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eyi-17 kwaye ziyakwazi ukukunika ukhetho olubanzi kulwakhiwo, uyilo kunye nofakelo.
Kangton zithengisiwe kumazwe kwihlabathi liphela kubandakanya i-USA, Canada, European Union, Australia,
Wamkelekile kwaye ukhethe Kangton
xa sisonke singakha ikamva eliqaqambileyo.
© Copyright - 2004-2021: Onke amalungelo agciniwe.